Gadaa Oromoo Tuulamaa: Waldhibdeen Gadaa Tuulamaa keessaa maaliif fala dhabe? - BBC News Afaan Oromoo
Gadaa Oromoo Tuulamaa: Waldhibdeen Gadaa Tuulamaa keessaa maaliif fala dhabe?
Fulbaana bara dabre baallii ka fudhatan Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa Irreessoo barri Gadaa isaanii otoo hin obba'in 'alangeen irraa fuudhame' ykn buqqifaman jedhu mataduree haasaa ijoo miidiyaalee hawaasummaa ta'eera.
BBC'nis dhimmuma kana qulqulleeffachuuf qaamolee dhimmi kun isaan ilaalu odeeffateera.
Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa BBCtti akka himanitti 'dubbiin kun dubbii dharaati,'' jedhu. Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatuu garuu, namni haaraa alangeen dabarfameef jiraachuu dubbatu.
Abbaan Gadaa haaraafi kan duraanii haasofsine dabareedhaan wal himatu. Waldhabbiiin isaanii waggaa lamatti hiiqa.
'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe'
'Walgahii Bayyanaa Sanbatuu nutu hambise'
Sirni Gadaa rakkoolee hawaas-dinagdee araaraan waldhibdee furuun beekamu, Abbooti gadaa baallii walitti dabarsan mana murtiitti wal himataa jiru.
Waldhabbii Abbootii gadaa haaraafi duraanii gidduu tureef Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatu gidduu keenya seenee wal nu dhabsiisaa jedhanii himatu abbaan Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo - Goobanaa Hoolaa kana hin fudhatan.
Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa garuu waldhabsiisuuf otoo taane araarsuuf gidduu seenuu ibse.
Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyaanaa Sambatu garuu aangoo isaanirraa buqqifamuu (mulqamuu) dubbatan. Seeraan bulchuu hin dandeenye jedhanii kaasu.
Akka isaan jedhaniitti guyyoota lama dura sirna muudama hordofuun namni haaraan bakka isaanii bu'e muudame jiraachuu BBC'tti himan. Miseensota Gadaa isaanitu walitti qabamee irraa kaasee jedhan.
Miseensa Gadaa guutuu aanaalee 42 keessaa dhufani gara namoota 400 guutanitu walitti qabamee irraa kaase jedhan.
Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa reefuu waggaa tokko ergan iddoo namoonni kumaatamatti lakka'aman argamanitti muudame jedhu.
Gama biraatiin, Abbaan Gadaa duraanii Bayyanaa Sambatu, Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa 'gidduu keenya seenee walitti nu naqaa jira,' jedhanii himatu.
Hoogganaa Itti aanaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aabba Kabbada Deessisaa garuu waldhabbii kana keessaa qooda akka hinqabne BBCtti himan.
''Baallii walitti dabarsuun walqabatee adeemsarratti rakkootu ture,'' kan jedhan Aabba Kabbadaan, waldhabbiin isaanis waggaa 2 guutuu kaasuudhaan akka jaarsummaan gidduu seennee turre, silaa akka mootummaatti gidduusaani taa'uun nurra hin turre jedhan.
Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa aangoorraa kaafamuu akka hin beeknes dubbatu.
Waggaa saddeetitti qofaa aangoo walitti dabarfama yoo rakkoon addaa jiraate waggaa 4tti gamaggamanii jijjiru malee, abbumti arge kan arge muude kaan buusuu hin danda'u jedhu.
''Abbaan fedhe lafuma ka'ee abbaa Gadaa hin muudu sirna of danda'e qaba,'' jedhu.
Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa Irreessoo wayita Fulbaana 2018 [A.L.I Fulbaana bara 2011] baallii fudhatanitti "Gadaan Meelbaa kan mirgi Oromoo itti kabajamuu fi aadaafi duudhaan itti dagaagu akka taatu nan hojjedha," jechuun isaanii ni yaadatama.
Bayyanaa Sanbatuu: 'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe'
'Mootummaan seeraan ala Gumii Tokkummaa Abbootii Gadaa diige' - Bayyanaa Sambatuu
24 Elba 2019
Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa: 'Walgahii Bayyanaa Sanbatuu nutu hambise'
28 Hagayya 2019
Viidiyoo Hayyuu 'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe'
Wal-dhibdee Gadaa Meelbaa: Dhibdeen Gadaa Meelbaa keessa ture furameera
'Gadaa koo keessatti Oromoon hunduu ni bilisooma'
'Ce'umsa Itoophiyaa 'hadiidarratti tiksuu'
'Dubartoonni shakkii tokko malee dhiirota ni caalu'
Arsenaal dhimma Oziil ilaaluuf jira - Ljungberg
Haleellaa Koongootti qaqqabeen lammileen nagaa ajjeefaman